DHEGEYSO: Caqabad haysatey Soomaali ku nool Rinkeby oo QAYB ahaan la xalliyey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Caqabad haysatey Soomaali ku nool Rinkeby oo QAYB ahaan la xalliyey...
DHEGEYSO: Caqabad haysatey Soomaali ku nool Rinkeby oo QAYB ahaan la xalliyey + Sawirro
(Stockholm) 20 Sebt 2019 – Saaka ayaa xal ku meel gaar ah loo heley qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Rinkeby goobo ey dharka ku dhaqdaan, middaasina oo ey la’aayeen muddo bil ku dhowaad ah.
Idaacadda Sweden laanteeda af Soomaaliga oo saaka booqatay xaafadda Rinkeby oo dhacda waqooyi galbeed ee magaalada Stockholm ayaa soo aragtay in iminka lasoo dhigay ilaa 12 qasaaladood oo ay keentay sharikadda Familjeböstader oo noo sheegtay in isla maantaba dharka lagu dhaqan kari doono, kuwaasoo ku kala dhex jira 3 qol oo ah kuwa qaad qaadma.
Saynab Maxamed Yuusuf oo xilligaa u timid inay waqti ka qabsato qasaaladaha la keenay ayaa nooga warrantay farqiga u dhexeeya qasaaladahan iyo kuwii gubtay.
– Wallaahi farqi wayn baa u dhexeeya, kuwanina wax ay ku filan yihiin ma jiraan, waxaan codsanaynaa in kuwii hore dhaqse naloogu sameeyo,’’ ayay tiri Saynab.
Anwar oo isna ka mid ah dadka degaanka ayaa noo sheegay in ay dharka kusoo dhaqdaan xaafado kale, sida Tensta, taas oo dhib ku ah dadka aan gaariga lahayn ama uu ciidanku ku xun yahay.
Waxaa iminka meesha lasoo dhigay 12 qasaaladood oo min 4 u kala yaalla 3 qol oo qura, waloow la sheegay inay qayb kale soo socoto misna Saynab ayaa noo sheegtay inay tiro ahaan aad uga yar yihiin kuwii ay u barteen inay dharka ku dhaqdaan ee gubtey.
Caqabadan ayaa ka dambeeysay kolkii uu dab qabsaday qolal dhar dhaqaal ah iyo mid shirarka lagu qabto oo ku yaalla xaafadda Rinkeby xilli saq dhexe kaddib abbaarihii 1-dii habeennimo 27-kii bishii tagtay ee Agoosto, midkaasina oo gebi ahaan bas beeliyay.
Qarada dabka ayaa laga garan karayay in butaaca qaaca laga arkayay ilaa degmada Sollentuna, waxaana guryaha ku hareereeysan laga daad gureeyay ilaa 100 qofood, halka ay dab daminta ka qayb galeen ila 50 dab damis iyo gawaari kale sida aambalaasta iyo wiishashka waawayn.
Previous articleDHEGEYSO: Somaliland oo iska FOGEYSEY warbixin lagasoo saaray maamullada Somalia
Next articleMagaalo dadka telefoonnada jidka ku isticmaalaya u sameeysay WADDO gaar ah + Sawirro